Archive du 20180516
Tolon’ny depiote 73 Hiankinana fiovana maro
Depioten’ny fanovana ! Izay moa izany no anarana nosafidian’ireo depiote mpitari-tolona miisa 73 etsy amin’ny kianjan’ny 13 sy manerana ny nosy amin’izao fotoana.
Famahana ny krizy Miantso fifampidinihana ny Alemanina
Nosokafana tamin’ny fomba ofisialy omaly tetsy amin’ny minisiteran’ny raharaham-bahiny malagasy etsy Anosy ny fankalazana ny faha-135 taonan’ny fiaraha-miasan’ny firenena malagasy sy alemanina (talata 15 mey 1883 – talata 15 mey 2018).
Tolona sendikaly Nahazo rariny teny amin’ny fitsarana
Nafana dia nafana ny tolona sendikaly tamin`ity indray mitoraka ity kanefa zon`izy ireo no takiany. Omaly no namoaka ny didiny ny filankevi-panjakana ka naato ny didy famindran-toerana sy fanasaziana an`ireo mpiasa nikasa hanangana sendika eo anivon`ny toeram-piasana misy azy.
Fokontany Amboasarikely Antsahavola Nahazo toeram-pidiovana sy fanasana lamba vaovao
Omaly talata 15 mey no natolotry ny minisitry ny rano, ny angovo ary ny akoran’afo, Lantoniaina Rasoloelison, tamin’ny fomba ofisialy ny toeram-pidiovana sy fanasana lamba vaovao ho an’ny mponin’Amboasarikely Antsahavola.
Miala Rajao !
« Miala Rajao ! » Tsy misy izay tsy mahalala na mahita izay hiaka izay angamba ireo mpanara-baovao sy mpilalao eny anivon’ireny tambajotran-tserasera ireny.
Tsenabe “La Grande Braderie de Madagascar” Homena vahana ny orinasa sy ny vokatra Malagasy
Hotontosaina eny amin’ny Lapan’ny Fanatanjahantena Mahamasina ny 23-27 mey ho avy izao ny andiany manaraka amin’ny Tsenabe “La Grande Bradérie de Madagascar”, Karakarain’ny orinasa Madavision.
FANDRIPAHANA ALA HAROVANA
Mirefy 30 hektara eo no voamarina sy hitan'ny tompon’andraikitra V.O.I sy ny foibem-paritry ny tontolo iaiana, ny haivoahary ary ny Ala ao Alaotra Mangoro, tao anatin’ny kaominina Manakambahiny Atsinanana